आङा जुनी ! यो निधारमा तिमले लगाइदिएको टिका कसरी बिसौँ – मिलिजुली खबर
मैले सानी भान्जी सम्झेँ । उसले देख्न बाँकी संसार सम्झेँ । भोग्न बाँकी जिन्दगी सम्झेँ । आमालाई भने– आमा ! फूलहरू साना–ठूला सबैलाई हुर्काउनू । फुलाउनू । जति फुल्ने हो फुलोस् ।
हाम्रो ‘आङा’ र ‘कोन्मे’ बहिनी र भान्जी अहिले रहेको भए यसरी नै फुल्थे होला आमा । हो यसरी नै मुस्कुराउँथे होला । यसरी नै हाँस्थे होला । उताबाट केही आवाज आएन । थोरै सुँक्क–सुँक्क सुनेँ … ।
मैले सहज जवाफ दिन्थेँ, ‘यो हाम्रो वर्गको पुस्तक हो, हामीले पढ्ने हाम्रो मुक्तिको आवाज हो यो ।’ तिमीले कति बुज्थ्यौ कति बुज्दैनथ्यौ म अहिले नि बुझ्दिनँ ।